Guddiga beelaha Bari iyo sanaag oo taageeray guddiga xalinta ee musharixiinta keeneen (Dhegeyso) – Radio Daljir
Diseembar 9, 2013 4:08 b 0
Boosaso, December 9, 2013 – Guddiga wada-tashiga gobollada Bari iyo Sanaag ee Puntland ayaa maanta shir jaraa?id oo ay ku qabteen magaalada Bosaaso, waxay kaga hadleen arrimaha doorashada dhowaan la filayo in ay dhacdo.
War-saxaafadeed lagu soo bandhigay shirka jaraa?id ayey guddigu ku canbaareeyeen habka loo soo magcaabay guddiga Ansixinta iyo xalinta khilaafaadka Puntland ee uu magcaabay madaxweyne Faroole.
Guddiga ayaa sidoo kale taageeray magcaabista guddiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka Puntland oo ay ku dhawaaqeen musharaxiin dhowr ah oo shalay ku soo bandhigay guddiga magaalada Boosaaso ee xaruunta gobolka Bari.
?guddiga badankiis waa xubnaha ururkii horseed ee xukuumada Faroole, guddiga wada-tashiga gobollada Bari iyo Sanaag wuxuu si buuxda u taageerayaa, guddiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka ee Puntland ee ay magcaabeen musharaxiinta.? Ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka.
Ugu dambayntii Cabdiraxmaan Axmed Cabdulle oo ka tirsan guddiga wada-tashiga gobollada Bari iyo sanaag ayaa sheegay in ay tacsi u diyaaraan beeldaaje Axmed Beeldaaje Maxamed oo ku geeryooday magaalada Qardho ee xaruunta gobolka Karkaar.
Dhegeyso: – shir jaraa?id oo uu saxaafada u akhriyey Cabdiraxmaan Axmed Cabdulle?